News 18 Nepal || महिलाको अंगमा हुने कोठीले कस्तो संकेत गर्छ ?
काठमाडौँ । मानव शरीरका हरेक अंगले उसको स्वभावका विषयमा थुप्रै जानकारी दिइरहेको हुन्छ । शरीरको अनुहार र सम्पूर्ण शरीरको बनावटलाई अध्ययन गर्ने शास्त्र हो, समुद्र शास्त्र । यस शास्त्रलाई आधार मानेर मनुष्यको सम्पूर्ण स्वभाव र उसको भविष्यको बारेमा पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो शास्त्र वैदिक कालदेखि नै पूर्वीय सभ्यतामा प्रचलित रहेको छ ।
यसैगरी, यस शास्त्रको वर्णन गरुड तथा भविष्य पुराणमा पनि उल्लेख गरिएको छ । यस शास्त्रको नाम समुद्र ऋषिबाट आएको हो । ऋषिले यस ग्रन्थलाई व्यापक प्रचार प्रशार गरेका कारण यसलाई समुद्र शास्त्र भनिएको विश्वास गरिन्छ । समुद्र शास्त्रले महिलाको अंगमा हुने कोठी बारेमा के भन्छ ?
– जुन महिलाको निधारमा कोठी हुन्छ, उनीहरु निकै आत्मविश्वासी हुने गर्दछन् । यस्ता महिलाहरुलाई आफु सफल हुन वा कुनै लक्ष्य हासिल गर्न कसैको पनि मद्दतको आवश्यकता पर्दैन । उनीहरुले आफ्नो बाटो आफै बनाउने गर्दछन् ।
– दुई आँखीं भौँ बीच कोठी हुने महिलाहरु भाग्य सौभाग्यको प्रतीक मानिन्छन् । यस्ता महिलाहरु निकै भाग्यशाली हुने गर्दछन् । यी महिलाहरुको जुनै घरमा विवाह भए पनि त्यस घरमा धन र अन्नको कहिल्यै कमि हुँदैन । यस्ता महिलाहरुलाई कहिल्यै पनि पैसाको अभाव हुँदैन ।
– धेरै कम महिलाहरुको कानमा कोठी हुने गर्दछ । कानमा कोठी हुने महिला निकै बुद्धिमान हुने र कुनैपनि निर्णय गर्न सक्षम हुने गर्दछन् । यदि महिलाहरुको दुवै कानमा कोठी छ भने यस्ता महिलाहरुको जीवन आनन्दमय हुन्छ । यसैगरी, जो महिलाको देब्रे कानमा कोठी छ भने यस्ता महिलाहरुको दाम्पत्य जीवन सफल रहने समुद्र शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
– यदि कोही महिलाको गालामा कोठी छ भने यस्ता महिलाहरु सौन्दर्यको प्रतिक मानिन्छन् भने यिनीहरुको भाग्य पनि दरो हुने गर्दछ । गालामा कोठी भएका महिलाप्रति मानिसहरु चाडैं आकर्शित हुन्छन् । यस्ता महिलाहरुले अरुसँग आफ्नो काम सजिलैसँग निकाल्न सक्छन् ।
– यदि कोही महिलाको ओठमा कोठी छ भने यस्ता महिलाहरु निकै आकर्शित हुने गर्दछन् । मानिसहरु पनि यस्ता महिलाहरु प्रति चाडैं आकर्शित हुने गर्दछन् । ओठमा कोठी भएका महिलाहरु मेहेनती हुनुको साथै आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न दृढ हुने गर्दछन् ।
– महिलाको काँधमा साना कोठी हुनु धेरै शुभ हो । यी महिलाहरू सँधै मीठो बोल्दछन् । यो उनीहरूको विशेषता हो । तिनीहरूसँग आफ्नो जीवनमा सबै किसिमका सुख सुविधाहरू छन् । तिनीहरू आफ्नो पति या पत्नीमा सुन्दरताका साथ बौद्धिक खोजी पनि गर्दछन् ।